निषेधाज्ञाको असरः काठमाडौँको एक कोठामा बाउ छोरी यस्तो अवस्थामा भेटिएपछि, परिवारको बि’जोग ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
May 15, 2021 AdminLeaveaComment on निषेधाज्ञाको असरः काठमाडौँको एक कोठामा बाउ छोरी यस्तो अवस्थामा भेटिएपछि, परिवारको बि’जोग ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
३ छोरीका बुवा बनेका डील्ली भन्छन छोरीले दिसा पिसाब स्याहार्दा आफैलाई बि.ष खाएर मरम जस्तो लाग्छ भन्छन । श्रीमतीले लकडाउन अगाडि महिनाको ५ हजार आउने जागिर गर्थिन तर त्यो पनि अहिले छैन र छोरीले फेन्सीमा काम गर्थिन त्यहाको पनि अहिले आश हरायो भन्दै छोरी भक्कानिईन । १५ बर्षकी छोरी ९ कक्षामा पढदापढदै बाबुको यो अवस्था भएपछि पढाई पनि छोडिन ।
रुमभाडा नदिएको पनि २ महिना भयो अब सडकमा बास होला भन्दै परिबारनै भक्कानिए । थप हेर्नुहोस् भिडियोमाः